Izindatshana zikaDane Atkinson zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UDane Atkinson
UDane Atkinson waqala inkampani yakhe yokuqala, iSenseNet Inc., eneminyaka eyi-18. Le nkampani yakhula ngokuqhamuka ngokusebenzela izinkampani zeFortune 500 (WPP, Pfizer, Lucent) kumakhulu ezisebenzi emazwenikazi amathathu. Kusukela lapho, ubenomsebenzi ophumelele ngokwedlulele njengesikhulu sezobuchwepheshe futhi usungule, wathenga, futhi wathengisa izinkampani ezingaphezu kweshumi nambili. Ubuchwepheshe bakhe obuningi nobuchwepheshe bokumaketha busisiza ukuthi silethe izinsizakalo ezicebile kumakhasimende ethu. Ngaphezu kwesikhundla sakhe njenge-CEO, uDane ubuye asebenze njengomeluleki nelungu lebhodi ezinkampanini eziningana zobuchwepheshe eziholayo.
NgoMgqibelo, Januwari 23, 2016 NgeSonto, uJanuwari 24, 2016 UDane Atkinson
Ngo-2016, ukuhlukaniswa okuhlakaniphile kuzodlala indima ehamba phambili ezinhlelweni zomthengisi. Badinga ukwazi phakathi kwezilaleli zabo zamakhasimende namathemba ukuthi ngubani ohlanganyele kakhulu futhi onethonya. Behlome ngalolu lwazi, bangaletha imiyalezo ebhekiswe futhi efanele kuleli qembu elizothuthukisa ukuthengisa, ukugcinwa, nokwethembeka okuphelele. Ithuluzi elilodwa lobuchwepheshe manje elitholakalela ukuhlukaniswa okuqondakalayo isici Sokuhlukanisa Izithameli esivela kwaSumAll, umhlinzeki we-data analytics exhunyiwe.